Top Forex Forex vola amin'ny varotra ao amin'ny 2019 - Ny tsara indrindra Best Pairs amin'ny Forex Trading
Top Forex Forex vola amin'ny varotra amin'ny 2019 - Best Pairs Currency
Karazam-barotra fototra amin'ny varotra EUR / USD
Ny roa amin'ireo tanjaka ara-toekarena lehibe indrindra eran-tany dia tsy azo antoka loatra ny Vondrona Eoropeana sy Etazonia. Ny dollar, izay antsoina ihany koa hoe Greenback, no vola naloa indrindra manerantany indrindra manerantany ary koa ny ankamaroany indrindra, ka ny EUR / USD no mpivady be mpividy indrindra.
Noho ny toetry ny liquidity ankehitriny, ny mpivady dia manaparitaka be dia be toy ny safidy voalohany amin'ny mpivarotra mitady tombony amin'ny fampiasana vola eo amin'ny tsena ara-bola. Ny fanapahan-kevitra momba ny varotra informatika sy ny karazana varotra varotra maro dia azo ampiharina amin'io mpivady io, noho ny loharanon-karena ara-toekarena sy ara-toekarena izay mitarika ny lanjan'ny vidin'ny tsena. Noho izany, maro ireo fahafahana misokatra hahazo tombontsoa ara-bola goavana avy amin'ny fiovan'ny toetr'andro tsy miovaova ity paolitika ity.
Ny torolalana amin'ny vidin'ny varotra EUR / USD dia aseho amin'ny tanjaka mifanohatra amin'ireo toekarena roa lehibe ireo. Manazava tsotra izao, raha mbola tsy miova hatrany ny zava-drehetra ary ny fitantanam-bolan'ny amerikana dia manoratra haingam-pivoarana haingana, hampisy ny Dollars hanamafy ny Euro avo kokoa. Ny mifanohitra amin'izany dia marina raha mitombo ny toekarenany ny Eurozone, izay hitarika ny Euro ho an'ny fanjakana matanjaka, raha ampitahaina amin'ny Dollar izay hampihena.
Ny iray amin'ireo fiantraikany goavana amin'ny fanovàna ny hery mifandraika dia ny tahan'ny zanabola. Raha toa ny tahan'ny zanabola amerikana matanjaka kokoa noho ny an'ny ekonomia eoropeana lehibe, dia mitaky vola amerikana mafy manohitra ny Euro. Raha matanjaka ny tahan'ny zanabola amin'ny Euro, dia mihena ny Dollars. Raha nilaza izany izy, ny tahan'ny zanabola irery dia tsy mamoaka ny hetsiky ny vidin-tsolika.
Ny fiakaran'ny vidim-piainana EUR / USD dia manjakazaka be noho ny tsy fandriam-pahalemana ara-politikan'ny Eurozone, satria marobe tokoa ny zava-misy fa ny Eurozone dia toeram-pitsapana ho an'ny politika ara-toekarena sy ara-bola. Ny fahasamihafan'ny fiovaovan'ny tsy ampoizina sy ny fahasamihafana eo amin'ireo firenena izay ahitana ny kaonty ao amin'ny EU ho an'ny Dollars matanjaka amin'ny Euro.
Ireto ny fandefasan'ny varotra EUR / USD mila fantarinao mialoha ny fampiasam-bola amin'ny mpivarotra vola be mpitia indrindra.
Karazana fototra amin'ny fivarotana GBP / USD
Ny GBP izay antsoina koa hoe Cable, ny Pound Britanika na ny haingam-bolam-bola, dia mandany vola any amin'ny faritra lavitra kokoa mandritra ny andro. Ny GBP / USD dia nalaza ho toy ny mpivarotena ratsy indrindra sy tsy misy vidiny satria tsy mahazatra ny mahita fampitandremana diso sy hetsika tsy ampoizina. Ny fanovana tsy azo ovaina amin'ny vidiny dia ny tombontsoa lehibe amin'ny mpivarotra traikefa miaraka amin'ny fampiasam-bola sarotra ho an'ny mpandray anjara.
Ny fampiasana ny teknikam-panadihadiana ara-teknika sy ny vaovao manan-danja avy any Royaume-Uni sy Etazonia dia antony iraisan'ny mpivarotra ara-barotra amin'ny fomba ahafantarana izay mampitombo ny tombontsoa azonao. Misy torohevitra roa tsara tokony hodinihinao rehefa misafidy ny GBP / USD. Ny fananganana tetik'ady ara-barotra tena tsara dia mifototra amin'ny fandinihan-tena hatrany ny vaovao momba ny toekarena roa, indrindra mba hamantarana sy handinihana ireo vaovao tsy ara-toekarena tsy ampoizina izay mety hiteraka fihetsika henjana amin'ny vidin'ny tsena.
Karazana fototra amin'ny varotra USD / JPY
Ny yen izay vola be indrindra amin'ny fitantanam-bolan'i Azia dia endrika iray amin'ny proxy ho an'ny fitomboan'ny toe-karena Aziatika. Raha misy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny sehatra Aziatika, dia matetika ny mpivarotra dia mamaly amin'ny fivarotana na ny fividianana ny yen ho toy ny fanoloana ny volan'ny firenena Aziatika hafa izay tsy mora ho an'ny varotra. Tsara ihany koa ny manamarika fa ny toekarena japoney dia nanoratra ny vanim-potoan-drakitra ara-toekarena ambany sy ny fihenanam-bidy ambany. Raha ny fivarotana USD / JPY, ny fampitomboana ny tombam-bidiny amin'ny hoavy dia ny toekarena japoney izay tsy maintsy ekentsika.
Maro amin'ireo sehatry ny forex no manaiky ny anjara toeran'ny Yen amin'ny varotra. Noho ny politikan'ny Minisitry ny harena ankibon'ny tany Japoney izay nahatonga ny ankamaroan'ny 1990s ho an'ny 2000s, nindramin'ny mpivarotra tamin'ny vidiny kely ny vola japoney ary avy eo dia nampiasa izany mba hampiasana vola hafa mandoa vola. Izany dia manome tombontsoa amin'ny fahasamihafan'ny tahan'ny.
Noho izany amin'ny lafin'ny tontolo iraisampirenena, ny fandeferana tsy tapaka ny Yen dia naneho fankasitrahana ho asa sarotra. Na izany aza, ny Yen dia miara-miasa amin'ny fototra fototra toy ny vola hafa.
Ny iray amin'ireo fitarihan-danja lehibe voamarika amin'ny sandan'ny japoney dia ny US Dollar. Ity fihetsika tsy dia mazava loatra ity dia ny antony mahatonga ny mpivarotra mpivarotra hampiasa ny teknikam-pandinihana teknika mba hahatakarana ny toetran'ity mpivady ity, amin'ny fomba fijery maharitra. Ny varotra tsy tapaka varotra dia mety miovaova amin'ny 30 na 40 anao hatramin'ny avo indrindra raha 150 ianao.